Namhlanje, cingela ubomi bakho ngaphandle kokuncibilika kwezinto ezinqabileyo. Sifanele sibe nzima kwaye sikhethise iteknoloji eyenziwa ngabakhiqizi nje kwesikhumba, ukuze abathengi baqwalasele iimveliso zabo. Ukuxhaswa kweentsimbi, ezenziwe kwiivenkile, zinkulu kangangokuthi nje amehlo asebenzayo kwaye iingcinga ziyadideka. Yintoni endiyenzayo xa ndikhetha insimbi? Ziziphi iiparitha ezibaluleke kakhulu kwaye ziyimfuneko? Masizame ukuphendula le mibuzo.
Khetha insimbi yerhwebo ukuba wena okanye abahlobo bakho sele nisene nabo ngaphambili, kwaye nandivuyayo. Ngaphandle kwegama elidumileyo, ke loo mveliso inokuthenjwa ngakumbi. Abavelisi abayi kuhlambalaza idumela ngokunikela ngemveliso ephantsi kweemarike. I-brandmark kwakhona ibeka iimeko ngewaranti kunye ne-post-warranty service - ngumbuzo wenani lamasevisi enkonzo kunye nomgangatho wokunikezelwa kweenkonzo. Ngakolunye uhlangothi, kufuneka uqonde ukuba uphawu olusasaziwa luvelisa iimveliso zecandelo elixabiso elibi ngaphezu kwegama elincinane. Ukuphonononga ubuchule bakho bezemali kwaye unqume kwi-variant ephezulu kakhulu yexabiso lentengo kunye nomgangatho.
Amandla entsimbi ayichaphazela ixesha lokutshisa i-sole kunye nokushisa kwe-stroke. I-Irons inoluhlu olulandelayo:
Iimpawu eziphantsi kwamandla;
Iintambo ezinegunya eliphezulu.
Amandla amakhulu yesinyithi ngama-1600 watts. Ngokubanzi, la manani avela ku-1200 W ukuya ku-2400 W. Ukukhethwa kwamandla afanelekileyo kunokufezekiswa ngokugxininisa kumthamo wokutywala. Ephakamileyo umyinge womsebenzi, inamandla ngakumbi insimbi iyakufuneka. Isinyithi esinamandla sihlaziya ngokugqibeleleyo iingubo zangaphantsi, ngaphandle kokugqithisa nayiphi na indawo enzima ukuyifumana.
Isoleyile ezityhila ngokulula phezu kwezinto ezilungileyo. I-friction kunye nesithambiso kufuneka ibe yinto encinci, kwaye ukushisa kwetyala kufuneka kuhanjiswe phezu komhlaba wonke osebenzayo. Indoda kufuneka ibe namandla kwaye ithambe ukusebenzela izambatho. Iingxowa zentsimbi zinalo iziqinisekiso ezilandelayo:
Isitampu seAluminium. Isinyithi esinjalo sinomgangatho ophezulu wokuqhuba i-thermal kunye nexabiso elithandekayo, kodwa liqulethe neephene ezifihlakeleyo. Ngokukhawuleza emva kokuqala kwentsebenzo yesinyithi, imiqatyana ingabonakala kwindawo yayo yokusebenza. Yaye oku akuyona into embi kakhulu! Ukususela kwintsimbi enokuyithandayo into enokuyithandayo (emva kokutshiza, i-gloss on the fabrics ingase ihlale). Noko ke, abakhiqizi bathi baphumelele ukujamelana neengozi ezingentla ngentsebenziswano ye-thermal ye-soleplate yentsimbi kwaye banikele abathengi enye i-aluminium anodizedi.
Inye yenziwe yensimbi engenasici. Olu hlobo lugxininiso luzinzile kwaye lufanelekile, ngoko ke luthandwa phakathi kwabathengi. Abanye bavelisi basebenzisa iiperiti ezikhethekileyo kwiipafira. Oku kunika amandla kwisinyithi kwaye ukuvumela ukuba islayitile kalula phezu kweendwangu.
I-Sole kwizinto ezidibeneyo. Olu khetho luvele kwimarike kungekudala. Ngokuqhelekileyo sifumana i-aluminium i-aluminium eneqabunga lentsimbi. Ngamanye amaxesha i-nickel iyongezwa, i-enamel isetyenziswe, njl. Konke oku kuvumela ukuba kuphuculwe iiparitha nganye zensimbi, eziqinisekisa umgangatho womsebenzi wayo.
Isitrama se-Metal-ceramic. Isinyithi esinomxholo onjalo asibizi kakhulu, sibukeka sisimanje kwaye into ebaluleke kakhulu kukuba i-ironing high quality kunye ne-glide emangalisayo. Kodwa uyaqonda ukuba apha awukwazi ukwenza ngaphandle kweminigus yakho. Le yodwa inqabile kakhulu. Naluphina, nantoni elincinci inokutshatyalaliswa ngonaphakade insimbi yakho ngenxa yesigqeba seengubo ze-ceramic.
Iimodeli zokushisa zentsimbi
Kule meko sithetha ngeqondo lokushisa apho inxalenye yensimbi itshiswa khona. Imodi iguqulwa isebenzisa isilayidi esisemzimbeni. Kukho ukwahlula okhethekileyo kunye nezinye izikhokelo malunga nokuba yiyiphi impahla enokuthi ifakwe kwiqondo lokushisa okhethiweyo. Isalathisi esihle sesinyithi xa i-iron inakho ukukwazi ukufumana ubushushu obufunayo ngexesha lokutywala. Ngokukodwa le nto ibalulekile kubunculi bokudibanisa.
Ubude obude bentambo buyiimitha ezimbini. Iya kuphepha ukusetyenziswa okongeziweyo kweentambo zokongezwa. Iimodeli ziveliswa nge-ball mounts, eziyimfuneko ukuqinisekisa ukuba intambo ayifuni kwisiseko. Namela iingcingo eziboshwe kwizinto eziphathekayo. Xa umbane oshushu uyathinta intambo, ayiyi kukhubaza isinyithi.
Kwivenkile, thatha insimbi esandleni sakho. Zivale ukuba zikulungele wena, nokuba zifanelekile ngesisindo. Khumbula, ngokugqithisileyo isinyithi iya kwenza kube nzima ukwenza izinto ezinkulu, ezinzima-ziza kubangela ukukhathala kwezandla. Isisindo esisisiseko sensimbi sibonwa njenge-1.3-1.5 kg.
Ngamnye wethu ngokukhawuleza unokulibala ukucima insimbi. Insimbi ekhuselekileyo yinto enomsebenzi wokuvala ngokuzenzekelayo. Kuya kusebenza ukuba isinyithi asihambeli ixesha elide.
Iimpawu zanamhlanje zixhotywe ngeentonga ezikhethekileyo kunye nekhaseteti ukukhusela ekuhlaleni i-plaque kwindawo yamanzi. Ngokwemigaqo yokusebenza, kufuneka ukuba iguqulwe ngokukhawuleza, kwaye kwezinye iimodeli ngokubanzi, nje ukuba ixhomekeke ekucocweni komatshini. Ukuba ezi zinto zinganikiweyo kwintsimbi ekhethiweyo, kuya kufuneka usebenzise amanzi atyhidiweyo okanye abilisiwe.
Inkqubo yokukhutshwa kwamanzi
Lo msebenzi uncedo kakhulu. Xa ukhenkcela iingubo eziphantsi kweqondo lokushisa, ubeka umngcipheko ukushiya amabala kunye namacwecwe kwiindwangu. Oku kunokwenzeka ukuba umqhubi awukhiphi kwaye amanzi angena emigodini ye-soleplate yentsimbi. Gwema iingxaki ezinjalo nje - khetha insimbi kunye nenkqubo yokulwa ne-anti-drip system.
Imisebenzi yokuThuthukisa kunye nokuPhalaza
Imisebenzi enjalo iya kukunceda ukugqithisa izinto ezigqithiseleyo. Ukuhlawula ngokukhethekileyo ukutya kwesitya. Ingaba yimiba okanye ingqamle. Iimodeli ezintle kakhulu ezinomtsalane. Ngokuncedwa kwalo, unokufikelela lula kwiindawo ezingenakufikeleleka, ngaphandle kokulahla nayiphi na i-millimeter yeengubo.
Musa ukukhawuleza kunye nokukhetha, uthathe ngokungathí sina, ulinganise zonke iingxaki kunye nokuqhafaza, ngoko isinyithi iya kukwazi ukukholisa wena kunye nomsebenzi wayo obalaseleyo ixesha elide, kwaye inkqubo yokubamba i-ironing iya kuba isifundo esihle.
Ngaba kunzima ukunqoba ukulala?
Isipho samantombazana, amantombazana, abafazi
Isipho kumama oselula
Indlela yokulwa nenkuni ekhaya
Ukutshatyalaliswa kwabantwana besikolo sokufunda esikolweni
Ukunyuka komntwana kumntwana ngesantya
Iimfashiso zeentombazana kwi-prom
Vula isitolo sakho kwi-intanethi
Ungayifumana njani ingcamango yabantu?
Indlela yokulinganisela ukushisa kwe-basal
Iklabishi i-casserole ene-cottage cheese
Phuza kwi-melon ne-raspberry
Imiba yeSeptemba 1 Usuku loLwazi ngabafundi bokuqala, abafundela isikolo (i-kindergarten) kunye nabafundi beeklasi ezahlukeneyo. Iingoma ezilula, ezifutshane kunye ezihlekisayo kunye novuyo
Ukulungelelaniswa kweAntumnki: I-T & B Base 2016 i-collection-season collection